I-Saint Lucia, eyaba izwe / izwe elizimele ngoFebhuwari 22, 1979.
Idolobha elikhulu (Ama-Castries) itholakala engxenyeni esenyakatho yesiqhingi futhi imelela cishe ama-40% abantu.
Ezinye izikhungo ezinkulu zabantu zifaka iVieux-Fort neGros-Islet.
Isimo sezulu nesimo sezulu
ISt Lucia inesimo sezulu esishisayo nesishisayo unyaka wonke, olinganiswa yimimoya yokuhweba esenyakatho-mpumalanga. Isilinganiso sokushisa saminyaka yonke silinganiselwa phakathi kuka-77 ° F (25 ° C) no-80 ° F (27 ° C).
Kunakekelwa ngezempilo ezweni lonke. KuneZikhungo Zempilo ezingamashumi amathathu nantathu (33), izibhedlela zikahulumeni ezintathu (3), isibhedlela esisodwa (1) esizimele, nesibhedlela esisodwa (1) sabagula ngengqondo.
Unyaka wezifundo uqala ngoSepthemba uphele ngoJulayi. Unyaka uhlukaniswe amatemu amathathu (Septhemba kuya kuDisemba; Januwari kuya ku-Ephreli nango-Ephreli kuya kuJulayi). Ukwamukelwa esikoleni esiqhingini kudinga ukuhlinzekwa ngemibhalo ebhaliwe yomfundi kanye nezincwadi zokufunda ezivela ezikoleni zabo zangaphambilini.
Imidlalo edlalwa kakhulu esiqhingini ikhilikithi, ibhola likanobhutshuzwayo (ithenisi), ivolibholi nokubhukuda. Abasubathi bethu abadume kakhulu uDaren Garvin Sammy, uCaptain weWest Indies Twenty20 Team; ULavern Spencer, ukugxuma okuphezulu noDominic Johnson, isigxobo sepali.
Ama-Pitons ayizintaba ezimbili ezentaba-mlilo eyethu indawo yamagugu omhlaba esiseSt. Izintaba ezimbili zePiton mhlawumbe ziyisithombe esidwetshwe kakhulu kulesi siqhingi. Enkulu yalezi zintaba ezimbili ibizwa ngeGros Piton kanti enye ibizwa ngePetit Piton.
I-Sulfur Springs eyaziwayo iyindawo eshisa kakhulu futhi esebenza kakhulu e-Lesser Antilles. Ipaki icishe ibe ngamahektare angama-45 futhi ikhokhiswa njengentaba-mlilo eyiCaribbean kuphela ehamba ngomlilo. Kukhona amachibi ashisayo owenziwe umuntu lapho abantu bendawo nezivakashi bevame khona ukuthola amandla okupholisa lawo manzi anezimbiwa.
ISanta Lucia inomehluko wokuba nesibalo esiphezulu samaNobel Laureates ngomuntu ngamunye emhlabeni. UDerek Walcott wawina iNobel Prize in Literature ngo-1992 kwathi uSir Arthur Lewis wawina iNobel Prize in Economics ngo-1979. Laba bobabili abawinile bahlanganyela usuku olulodwa lokuzalwa lukaJanuwari 23, kwasala iminyaka engu-15 kuphela.
Inani labantu: Cishe ngo-183, 657
Indawo: 238 sq miles / 616.4 sq km
Ulimi Olusemthethweni: IsiNgisi
Ulimi Lwasekhaya: IsiCreole saseFrance
I-GDP Nge-Capita ngayinye: 6,847.6 (2014)
Ukufundiswa Kwabantu Abadala: 72.8% (Ubalo lwabantu luka-2010)
Imali: I-Eastern Carribe Dollar (EC $)
Izinga Lokushintshana: US $ 1 = EC $ 2.70
Indawo Yesikhathi: EST +1, GMT -4